Malunga nathi -I-Danyang NQ yezeMidlalo kunye noQeqesho Co., Ltd.
I-Danyang NQ yezeMidlalo kunye neFitness Co., Ltd. ijolise ekuveliseni iimveliso zelatex ezinobungcali kunye neemveliso zokomelela komzimba. Ngamava angaphezu kwe-10years kwimveliso yethu. Ezona mveliso zethu ziphambili kubandakanya ukumelana nelatex loop band kunye neyoga band, latex tubing expander njl. UMNQOPHISO Sinikela ingqalelo kumgangatho wemveliso kwaye "uMgangatho bubomi kumzi-mveliso wethu". Beka eyona ntengiso iphambili, phakathi & emva kwenkonzo yokuthengisa njengenjini yokukhula kwengeniso, Ukunikezela ngenzuzo kunye nokhuphiswano oluncedo kubathengi. Sisoloko sikhula kunye nabathengi kunye. UMBONO Ukuze ube yinkokeli eyaziwayo yeyoga kunye nemveliso yokomelela komzimba kunye nokuthumela kwelinye ilizwe kwiminyaka emi-3-5 ezayo. Sifezekisa oku ngokunika amandla abasebenzi ukuba babe ngabona babalaseleyo banokuba nakho kwaye bakhuthaze amaqela asebenza ngempumelelo. IINKCUKACHAUmgangatho wemveliso kuqala Abathengi kuqala baqwalasele umsebenzi weQela leNkonzo yokuNqwenela ukuZibophelela ngokuBalaseleyo kuLuntu.
I-Danyang NQ yezeMidlalo kunye noQeqesho Co., Ltd.
Ubume beshishini: I-R & D kunye nokuveliswa kwezixhobo zokomelela kunye nezixhobo, izixhobo zokubuyisela kwimeko yesiqhelo kunye nezixhobo.
Ubunzima beLatex Belt
Izakhono noBuchule bethu
Ukukhangela phambili kwikamva, siya kusoloko ukulandela umoya lweshishini "umgangatho kuqala, ingqibelelo bephosa lweshishini, unyamezelo, ukugqwesa" ukunika abathengi bethu umgangatho ophezulu kunye neemveliso phambili ngakumbi. Ukuhlangabezana neemfuno zezangqa zethu zezemidlalo kunye nokwenza igalelo elikhulu kwinjongo yesizwe yezemidlalo. Ngobunjani obugqwesileyo bemveliso, inkonzo yentliziyo epheleleyo kunye nexesha elifanelekileyo, umgangatho othembekileyo nothembekileyo weshishini kunye nokuziphatha okuhle, siphumelele ukuthembela kunye nokudumisa abathengi bethu. Ukusebenza kwethu kunye nenkxaso kunye nokukhuthaza abathengi bethu ukuba bakhe unobangela wezemidlalo ecaleni ngonaphakade. Siza kuzinikela ekuthandeni kwethu ezemidlalo kwaye sidale ikamva kunye nawe.
Inkampani yethu eneemfuno ezizodwa kwimveliso kunye nokulungiswa kweemveliso ezinje nge-thruster, ukubambelela, izixhobo zomzimba, ibhanti ye-latex tension, iringi ye-latex, ityhubhu ye-latex, njl njl.
Yonke into oyifunayo yenza iwebhusayithi entle